about - တံတားစောစက်, ကျောက်ခေတ် CNC စက်ပစ္စည်းရေးစင်တာ, Waterjet ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်, ထွင်းထုစက်, တံတားဖြတ်တောက်ခြင်းစက်, Waterjet Cutter
ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 1993, Foshan YongShengDa Machinery Co. ,, Ltd မှ. (YONGDA, သို့မဟုတ် YONGDA လြှပျစစျ), တစ်ဦးကိုတရုတ်အမျိုးသား Hi-tech လုပ်ငန်း, ဖွံ့ဖြိုးဆဲများတွင်အပ်နှံသည်, ကျောက်များ၏နက်ရှိုင်းသော-processing ပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စျေးကွက်, ကြွေထည်, ဖန်ခွက်နှင့်သတ္တု.
Yongda officially changed its name to Foshan Yongshengda Machinery Co., Ltd မှ.
5 axis bridge cutting machine,waterjet ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်,stone CNC machining center,engraving machine.
stones, granite,ကြွေထည်, ဖန်ခွက်နှင့်သတ္တု